मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ? | बाइबलले सिकाउँछ
^ अनु.5मानिससित प्राण वा आत्मा छ कि छैन भन्नेबारे थप जानकारीको लागि पृष्ठ २०८-२११ हेर्नुहोस्।
मरेको मान्छेले देख्न, सुन्न सक्दैन न त सोच्न नै सक्छ।—उपदेशक ९:५.
मरिसकेका मानिसहरू चिर निद्रामा छन्‌; तिनीहरूले सास्ती भोग्दैनन्‌।—यूहन्ना ११:११.
आदमले गरेको पापले गर्दा हामी जन्मेदेखि पापी भयौं; त्यसैले हामी मर्छौं।—रोमी ५:१२.
मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ? (भाग १)
मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ? (भाग २)